Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 70
Fanovana toe-tsaina hoe ?
Par Taratra sur 07/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Nahazo lesona tamin’ny filoham-pirenena ny mpanao gazety, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny amin’izay voalaza momba ireo raharaha nafampana teto amin’ny firenena, tato ho ato. Anisan’izany, sady nitana ny sain’ny maro, ny « Raharahan’Anjozorobe ». Fa teo koa anefa ny momba ny fampiharana ilay hetra Advance Cargo Declaration (ACD), izay nampifanolana ny mpandraharaha vaventy tamin’ny fitondrana. Ny […]
Olo-manga mahamangana vahoaka
Par Taratra sur 05/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Enti-milaza fahatsarana amin’ny Malagasy ny loko manga: manga feo, olomanga, voromanga, fary manga… Zava-doza kosa ny hoe mangana: mivalomainty, vizana. Miasa irery ny mangana, miaritra irery. Amin’izao toe-draharaham-pirenena izao, mba irariana ho manga amin’izay ny lanitry ny ambanilanitra na ny valalatsimandadiharona. Efa mangan’ny fiaretana ny mafy sy mangidy fa tsy ny manganana hatramin’izay. Tsy fandriampahalemana […]
Par Taratra sur 04/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola ambentin-dresaky ny rehetra ary mahasarika ny mpanara-baovao eto Madagasikara, eny fa na ireo Malagasy, mila ravinahitra any andafy aza, ny ambalavelona, miseholany ankehitriny. Tsy misy tsy voakasik’izany na lahy na vavy na tanora na antitra, na manankarena na mahantra na avy amin’ny antoko mpanohitra na mpanohana ny fitondrana. Sahiran-tsaina ny fianakaviana manana ireo mararin’izany. […]
Raikipohy tsotra tsy takatry ny be diplaoma
Par Taratra sur 02/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tontolo roa goavana indrindra sady anisan’ireo antoka ahafahana mampandroso firenena iray ny kolontsaina sy ny fanabeazana. Ho an’ny mpanjanatany, tsy misy zavatra hafa eo alohan’ireo. Ho an’ny tany zanahina na voazanaka kosa, ialohavana toekarena sy politika ny resaka kolontsaina sy fanabezana. Tsy takatry ny be diplaoma, hono, io raikipohy mifamadika io, ka izay no mahatonga […]
Vahoaka tsy matoky mpitandro filaminana sy fitsarana
Par Taratra sur 01/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tany sy fanjakana tan-dalàna. Fanambin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao io. Mby aiza? Hatramin’izao, mampahatsiahy izany hatrany ireo mpamatsy vola. Anisan’ny fepetra takiny ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna. Nefa anisan’ny tsy manaja izany voalohany ny mpampihatra lalàna. Vao nampahatsiahy ny afitsoky ny mpitandro filaminana eto Madagasikara ny Amnesty International, araka ny tatitra taona 2016/15, tamin’ny […]
Par Taratra sur 29/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mifarana indray ny volana. Mby aiza? Na ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka… Tsy hita be ihany. Akondro mahia misy masaka, saro-dazaina amin-kavana. Na boka mihalo-poza izay mihetsika amin’izao, manosika azy hiverina. Tena mitondra fahamarinan-toerana politika ve ny fijoroan’ny Antenimierandoholona? Tsy hita fiafara ny fifanarahana andraikitra eo amin’ny Antenimierampirenena sy ny filohan’ny Repoblika. Mbola amin’izany ihany ve […]
Tsy mahalala maty sy velona
Par Taratra sur 27/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fahampian-tsakafo, kere, mosary… Malaza izany, na nangingina aza taorian’ny atrikasa tany atsimon’ny Nosy, herinandro lasa. Tsy any ihany… Lasa resaka any amin’ny faritra hafa ny fahasahiranan’ny vahoaka ifotony… mahafaobe. Ny any atsimo, miverimberina noho ny tsy fahampian’ny orana sy ny rano ho an’ny olona, biby fiompy, fambolena. Ny amin’ny faritra hafa, mitohy sy mandavantaona […]
Hazo poak’aty fotsiny
Par Taratra sur 26/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Nafotaka tato ho ato ny fambolena zana-kazo. Ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny ala aza nanao hetsika niavaka mihitsy. Zana-kazo andramena no natsatony niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Toa fomba nentina nanakonana ihany ny fanisana ny bolabola etsy sy eroa izay ela vao vita na teo aza ny fanampian’ny Banky iraisam-pirenena, ara-bola, hanaovana ny asa. […]
Tsy misy takona izay tsy hiseho
Par Taratra sur 24/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Asakasaky ny mpanao ratsy e ! Hoy mantsy ny fitenenana manao hoe : « tsy misy miafina izay tsy hitranga, na takona izay tsy hiseho». Voasambotry ny mpitandro filaminana ihany, na nisitrika sy niafina, nandritra ny iray volana teo ho eo aza izay, ilay vehivavy nalaza ratsy, voarohirohy amin’ireny « Raharaha fakana an-keriny » zaza mianadahy, tany Toamasina, ireny. Nahabe […]
Mba tsy ho kobaka am-bava fotsiny
Par Taratra sur 23/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Natao ny fihetsiketsehana rehetra tany atsimon’ny Nosy, nitadiavana vahaolana hanafoanana ny krizy. Nanao be midina ny mpikambana ao amin’ny governemanta nampiseho fa miara-misalahy amin’ny famahana ny krizy any an-toerana. Tsy tany kosa, ny filoham-pirenena na ny praiminisitra nanisy lanjany iny hetsika nolazaina fa fihaonambe iny. Nipoapoaka ny tatitra nilaza fa samy nandray izay tandrify azy […]
Mosary… moa sarin’ady?
Par Taratra sur 22/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fahampian-tsakafo sa mosary na kere ny any atsimo? Tsy any loatra ny olana na adihevitra. Inona ny vahaolana? Na maika io, na maharitra. Mila jerena akaiky izay, tanterahina, tohizana. Tsy fisehoana hoe mijery sy manao zavatra izany, tsy vonjy tavanandro, tsy fialana bala. Fa tena fahatapahan-kevitra, fahasahiana, finiavana, fahavononana: asa haingana sy mivaingana. Moa […]
Par Taratra sur 20/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
21 febroary rahampitso. Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny na tenindrazana indray… Ny nahatonga izay Andro iraisam-pirenena izay? Ho fahatsiarovana ireo mpianatra maty notifirin’ny polisy tany Dacca, Renivohitr’i Bangladesh ankehitriny. Nitaky ny fampiasana ny tenindrazany, ny bengali, izay nambara ho tenim-pirenena faharoa tany Pakistan ireo mpianatra tany an-toerana. Fitiavan-tanindrazana ny ady ho an’ny tenindrazana, mila isiana […]
Miatrika fanadinana ny mpitondra
Par Les Nouvelles sur 19/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hadiva ho tapitra ny telo volana faharoa ho an’ny fampianarana. Hanomboka amin’ny volana marsa ny fanadinana, hitsapana ny ezaka vitan’ny tsirairay. Tsy afa-miala amin’izany koa ny fanjakana fa hotsapain’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena aorian’ny volana marsa ho avy io. Nanomboka tamin’ny volana oktobra ny fanomezana ny lesona tsy maintsy ianarana. Raha ny kabary sy fahaiza–miresaka aloha, mahay […]
Andriamanitra miangatra ?
Par Taratra sur 18/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Miangatra Andriamanitra… Dibo-drano ny tany avaratra, avaratra andrefana ary eto afovoan-tany. Any amin’ny tapany atsimo kosa, maina ny tany, mihantona ny orana, tsy misy ny sakafo… mba toy ny ahoana aza ity Madagasikara ity raha jerena avy eny an-danitra? Sao milentika anaty rano ny tendrony avaratra ary miakatra manakaiky masoandro kosa ny tendrony atsimo? Ny […]
Samy manana ny adiny…
Par Taratra sur 16/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Ady ny fiainana », hoy ny lohatenin-kiran’i Voahangy izay. Izay tokoa amin’ny lafiny maro. Voambolana toa zary mahazatra ny sofina ity hoe « ady » ity. Ady fiadin’ny mpanao politika ny fitadiavana tombontsoa ho an’ny tenany aloha. Ampiasaina amin’izany ny anaran’ny vahoaka izay tsy mahafantatra akory izay tena fomba fiadin-dry zalahy. Miahiahy adim-poko, ohatra, ny Sakalava, raha naneho […]
Lamoka lamokany ny vahoaka
Par Taratra sur 15/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Aleo hazava sao tsy mifankahazo ny resaka: leo sy tofoka ny hoe lamoka, ary izay tsy foy sy tsy tanteraka hatramin’ny farany ny lamokany: lamokan’atody, lamokan’olona, lamokam-paty izay mamo tsy mahatsiaro tena, lamokan-torimaso izay torimaso tsy vanona na fohy loatra… Inona no itanisana izany eto? Lasa adihevitra be ny amin’ny hoe “Manotrika atody lamokany” navoakan’ny […]
Asa fampihorohoroana !
Par Taratra sur 12/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Asa fampihorohoroana tsy tahaka ireny fahita any ivelany ireny, toy ny niseho tany Frantsa, na Etazonia, na ny fahita amin’ny televiziona any amin’ireo firenena arabo, ny miseho eto amintsika, fa asa fampihorohoroana hafa kely. Hafa kely satria ny jiolahy no mampihorohoro, kanefa mety misy koa ny mpaniraka hampihorohoro? Raha zohiana aloha ireny zavatra niseho tany Toamasina […]
Ny lasa, (tsy) fanadino
Par Taratra sur 11/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hotsarovana amin’ity anio ity ny faha-41 taona nahafatesan’ny Jjneraly Ratsimandrava Richard, filoham-pirenena malagasy, tamin’izany fotoana izany. Raha tsiahivina fohy, herinandro ny nitondrany ny firenena dia lavo izy. Notifirin’ny fahavalom-pirenena, teny Ambohijatovo, rehefa iny hamonjy ny trano fonenany iny. Ny lasa, tsy fanadino satria nanamarika ny tantaram-pirenena izany. Izy mantsy no filoham-pirenena, voalohany nisy namono teto […]
Par Taratra sur 10/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fiteny mahazatra ny hoe: ny vy, tsy mikitrana irery. Ilazana ny ady, misy antony fa tsy tongatonga ho azy na mandeha irery io: matoa misy ady, misy ankolafiny roa mifanohitra sy mifanandrina ao. Fa mety misy ny hoe vitsy mikitrana irery: miady irery, mitabataba irery… Amin’izany, mety misy mpihaino na tsia. Tsy karazan’ny vitsy mikitrana […]
Tsy mahagaga ry zareo raha mandroso
Par Taratra sur 09/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Nanamarika ny taom-baovaony ry zareo Sinoa. Tsy tao Sina ihany fa naneran-tany mihitsy, raha mbola toerana nahitana Sinoa, nahitana totorebika avokoa. 9 amin’ny Sinoa 10 latsaky ny 25 taona, mahay momba ny tontolon’ny kung-fu avokoa. Izay toerana malalaka rehetra ao amin’ny tanàna iray any Sina, saika natokana hanaovana qi Gong avokoa. Tafiditra anisan’ny taranja ampianarina […]
Mba tsy hampisy fitoniana ny fahasahiranam-bahoaka…
Par Taratra sur 08/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Haintany sy kere any atsimo, tondra-drano any avaratra… Inona koa? Tsy fandriampahalemana: tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra. Eo koa ny tsy fisian’ny asa, ny saritaka lava eto an-tampon-tanàn’ny Renivohitr’i Madagasikara amin’ny fandaminana sy fanadiovana: fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana, fivangongoan’ny fako… Manampy trotraka ny ady tany etsy sy eroa. Inona no itanisana izany? Tsy misy zava-baovao. Ny […]
Minia jamba mijabajaba an-jambany…
Par Taratra sur 06/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
5 febroary omaly, 7 febroary rahampitso. Tantara avokoa izany, raha itodihana ny omaly ary banjinina ny rahampitso. Faha-41 taon’ny nandraisan’ny kolonely Ratsimandrava fahefana tamin’ny jeneraly Ramanantsoa, ny 5 febroray 1975, omaly; ary fahafito taon’ny nisian’ny fitifirana mpanao fihetsiketsehana teo anoloan’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, ny 7 febroary 2009, rahampitso. Tena misy ve izay hoe fitodihana ny lasa […]